EU oo balaarineysa howl-galka looga hortagayo qaxootiga Liibiya ka soo gala - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
EU oo balaarineysa howl-galka looga hortagayo qaxootiga Liibiya ka soo gala
La daabacay tisdag 19 april 2016 kl 12.30
Waalström: howl-galka waa in uu waafaqsanaado xeerka caalamiga ah
sawir: Matthias Schrader/TT
Wasiirada arrimaha dibadda EU oo xalay kulan ku yeeshay Luxemburg ayaa isla gartay tillaabo militeri oo lagu caawinayo Libya si loo badbaadiyo naf loogana hortago qolayaha dadka soo dhoofiya.
Laakiin waddamada EU ayaa isku hubin in caawinad sidaas buuran siiyaan dalka Libya. Waxyaabaha hubaal la’aanta ka taagan tahay waxaa ka mid sida ay EU tabobar u siin karto ciidammada illaalada badda Libya.
– Waxaa jira tuhun ah in ay ciidammada illaalada badaha Libya ay ku lug leeyahiin dhowlaha dad dhoofinta. Marka waa arrin xasaasiyaddeeda leh. Laakiin waxaa jira taageero loo hayo in la balaariyo dadaalak howl-gal ee ciidammada EU Navfor ka wadaan biyaha Libya, ayey tiri Wasiirka arrimaha dibadda Sweden Margot Wallström.
Ciidammada EU Navfor ee Margot Wallström ka hadlayso ayaa ah ciidamo isku jira illaaliyaal badaha iyo welib militeri oo ka howl-gala biyaha Libya. EU ayaa sidoo kale dooneysa in howl u siiso ciidammadan ka hortagta hubka sharci darada ah ee laga soo geliyo Libya.
– Waxyaabaha kale oo kulankan looga ahdlay waxaa ka mid ahaa sidii looga hortagi lahaa hubka kontorobaanka ah iyadoo la cadeynayo howl-sha ciidammadan. Dhankeena waxaan sharuud ka dhignay in howl-galka uu waafaqsanaado sharuucda caalamiga ah, ayey Margot Wallström.
Taas micnaheedu tahay haddii Sweden ka qayb-galeyso howl-galkan ay markas ogalaansho looga heysto baarlamaanka Sweden.
Dadaalka ay wadaan wasiiradda arrimaha dibadda EU ayaa xiriir la leh qaxootiga faraha badan ee ka soo gudbaya dalka Liibiya kadib markii uu xirmay dhabahii ay qaxootiga ka soo gudbi jireen dhanka Turkiga.
Madaxa arrimaha dibadda EU Federica Mogherini ayaa xlay sheegtay dadaalada ay EU ka wado biyaha Libya lagu badbaadiyey dad kor u dhaafayo 13 000 oo qof oo 800 ahaayeen carruur, iyadoo sidoo kale gacanta lagu dhigay ku dhawaad 68 muqalasiin qaxootiga soo dhoofisah, kuwaas oo hadda ah maxkamad sugeyaal dhawaan la soo hortaagi doono maxkamad.
Utökad EU-hjälp till Libyen mot flyktingsmuggling
måndag 18 april 2016 kl 22.20